Ndụmọdụ zụ ahịa Forex kacha mma Beghọ Pro! - Mụọ 2 Trade February 2021
Ndụmọdụ ahia kacha mma nke 2021
Achọ forex trading Atụmatụ? Forex trading nwere ike ịbụ ụzọ kachasị mma iji nweta uru na-agbanwe agbanwe ma gbasaa pọtụfoliyo azụmahịa gị. Ma, ọ bụrụ na ị bụ ahịa ọhụụ - ọ ga-abụ na ịchọrọ ole na ole iji gosi na ị ga-ewepụ ọrụ gị na ụkwụ aka nri.
N’ụzọ dị oke mkpa, itinye ndụmọdụ ndị a n’ọrụ ga-enyere gị aka ịdị na-azụ ahịa na nkà azụmaahịa gị, yana ịnwekwa ịmụ ihe ọhụrụ.
Anyị ejikọtara 10 nke atụmatụ azụmaahịa kachasị mkpa nke 2021 anyị chere na ị bara uru.
Ndụmọdụ 1: Ghọta Forex Markets
Anyi aghaghi ikwusi ike ka odi nkpa inwe ezi nghota banyere ahia mbu tupu i tinye ego gi. Site na iwepụta oge iji kuziere onwe gị ihe dịka ego ụzọ abụọ, ndị mgbasa na leverage - ị nwere ike ịchekwa onwe gị nnukwu nrụgide na ego ogologo oge.
Dị ka ndị dị otú a, na ngalaba mbụ nke akwụkwọ ntuziaka azụmaahịa anyị, anyị edepụtara ụfọdụ n'ime ihe ndị kachasị mkpa iji ghọta tupu ị banye.
Otu ụzọ ego mejupụtara ego 2 dị iche iche. Uru nke ụzọ ọ bụla dabere na ọnụego mgbanwe nke ego abụọ ahụ.
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị jiri EUR / USD. N'ime ụdị ego a, EUR bụ 'ego isi', na USD bụ 'quote currency'. Nke a ga - abụ ikpe n'agbanyeghị ego ị na - eji.
Yabụ, a ga-ebu ụzọ kwuo ego nke mbụ, a ga-ekwupụtakwa ego nke abụọ. Nke kachasị mkpa, ma ego mbụ na nke abụọ nwere ike ịda mbà ma ọ bụ wusie ike, yabụ na ọnụego mgbanwe na-agbanwe mgbe niile.
Ọ bụrụ na ndị isi ego na-etolite ike megide quote ego, na ego ụzọ uru ga-ebili. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na isi ego na-esighi ike, ọnụ ahịa ego ga-ada.
Iwu Forex Market
Iwu na-enye gị ohere ịbanye ma ọ bụ wepu ahia ị nwere mmasị na ya. Iwu ndị a dabara na ngalaba 2 nke bụ 'zụta iwu' na 'ree iwu'. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, usoro ịzụta zụrụ na-egosi na ị chere na ụzọ ego ga-abawanye na uru, yana ire ere pụtara ihe megidere ya.
Ka anyi kwuo na uzo ego gi bu EUR / USD na uru nke EUR bu 1.1334
May nwere ike chee na EUR ga-ebili megide USD, yabụ na ikpe ahụ, ịnwere ike ịnye iwu ịzụta maka onye na-ere ahịa gị.
Mgbe ahụ, ịkwesịrị ịchọpụta ma ịchọrọ iji usoro 'ahịa' ma ọ bụ usoro 'njedebe'. Site na ịtụkwasị usoro ahịa, ị na-etinye iwu iji zụta ma ọ bụ ree na ego ọzọ a ga-enweta.
Ugbu a, cheta na ego ego ịrịọ ego agaghị adị 1.1334 na ntu ahụ, ebe ọnụahịa na-agbanwe na nkeji nke abụọ. Ka o siri dị, usoro ahịa ga - ewetara gị ọnụahịa dị n'elu ma ọ bụ n'okpuru 1.1334.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị ga - etinye iwu ịgba, ị ga - ezipụta ọnụego ị batara n'ahịa ahụ. Otú ọ dị, ị ga-echere ọnụahịa ka onye ọzọ na-ere ahịa kwekọọ tupu iwu ahụ amalite.
Na nkenke, ụdị azụmaahịa ọ bụla nwere ọnụahịa abụọ dị iche iche - ọnụahịa azụ ahịa na ire ere. Ihe dị iche n’etiti ọnụ ahịa abụọ a bụ ihe amara dịka mgbasa. Ọ dị mkpa ịnwe nghọta dị mkpa gbasara mgbasa, ebe nke a bụ akụkụ dị oke mkpa nke njem njem azụmaahịa gị.
Iji maa atụ, ka anyị were ya na ego ịzụrụ ihe bụ 1.1335 na ire ere bụ 1.1330.
1.1334 (ịzụta) - 1.1330 (ree) = 0.0004 (pips).
N'okwu a, na mgbasa bụ 0.0004, nke bụ ihe dị iche na nzụta na ire ere.
N’ụbọchị ahịa ụbọchị niile, ọ na-agbasa ngwa ngwa. Mgbasa a na-eme ka ihe dị iche iche dị iche iche dị ka mmiri (otu ngwa ngwa nwere ike ịzụta ma ọ bụ ree ya) na volatility (mgbanwe na-agbanwe agbanwe nke mmegharị ahịa azụmaahịa).
Isi ego ụzọ abụọ na-ahịa dị nnọọ elu mpịakọta karịa isi ma ọ bụ exotics ego. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, ka a na-achọkwu ego ahụ, ọ ga-eme ka ọnụ ahịa azụmaahịa dị ala. Nke a bụ n'ihi na mgbasa ga-adị ala (tighter).
Isi ma ọ bụ karịa ụdị ego abụọ na-achọkarị ịgbasa karịa ndị isi n'ihi ụda olu dị ala. Dịka, agbalịa ime ka onwe gị mara oke mgbasa ahụ, n'ihi na nke a nwere ike ime ka ị nwee ọnụ ahịa azụmaahịa dị elu.
Ntinye ego, itinye ego mgbazinye ego bụ ego eji ego iji mee ka ọnụọgụ ga-alaghachi ma ọ bụ akụkụ buru ibu nke azụmaahịa iji nweta uru. Mgbe imepere akaụntụ gị na azụmaahịa gị, ị nwere ike ịnye gị ego.
Y’oburu n’echiche itinye ego n’ihe banyere ezigbo ala na ụlọ, ị na-ejikwa obere ego akwụ ụgwọ ihe dị oke ọnụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ị na-ejikwa obere ego na-achịkwa nnukwu akụ.
Ego ntinye ego nke Forex nwere ike iburu 1: 2 ruo 1: 500 ma ọ bụ karịa.
Ọ bụrụ na ị na-agba £ 200 nke ego azụmaahịa gị ma tinye ntinye nke 1: 20 (ma ọ bụ 20x), nke a pụtara kama ịzụ ahịa na £ 200, ị na-erezi £ 4,000 (£ 200 x 20).
Site na otu ego nke £ 200, ọ bụrụ na i rite uru nke 1% ị gaara eme £ 2 (1% nke £ 200). Agbanyeghị, site na itinye ego 20x, uru gị ga - abụ £ 40 (£ 2 x 20)
A bịa n’inye ego, ọ dị mkpa ịmata oke gị. Site na ịtọ ntọala ntinye ego gị na ahụmịhe gị, o yikarịrị ka ị ga-ahụ onwe gị n'ọnọdụ ebe ị na-efu karịa ka ị nwere ike.
N’iburu nke a n’uche, ọ bụ ezi echiche ileba anya n’ihe gbasara ego gị ma wee mepụta ihe ego gị ga-abụ, yana ihe ị ga-enwe afọ ojuju. Dị ka akụkụ n'ọnụ, wịchọta maka ego ego anaghị akwụ ụgwọ maka itinye ego, ebe ọkwa dị elu nwere ike ịkọwa nsogbu.
'Pip' bu okwu achoputara 'onu ogugu na onu ogugu ma buru uzo kacha nta nke ndi ego ga-agbanwe n'ime ahia ahia. N'okwu dị mfe, pip na-egosipụta obere mgbanwe ọ bụla akara akara na ụzọ ego.
Standardkpụrụ a dị mma na-enyere aka igbochi ndị na-etinye ego na nnukwu ọghọm. Enwere ike ịtụ paịpụ site na isi ego ma ọ bụ ọnụego, mana a na-ahazi ya oge niile ma ọ bụ ebe ikpeazụ maka ọnụọgụ ego.
Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ọnụego maka GBP / USD nke bụ 1.2400. Iji dokwuo anya, nke a pụtara na maka £ 1 ọ bụla ị nwere ike ịzụta dollar 1.2400 US. Ọ bụrụ na enwere mgbanwe na pipụ ga-abawanye site na 1, mgbe ahụ ụzọ ahụ ga-adịzi 1.2401.
N'ikwu okwu n'ozuzu, ọ bụrụ na ọ bụ na USD abụọ ụzọ abụọ pip ga-abụ $ 0.0001 nke ọnụahịa e hotara, a na-akpọkarị 1 isi ihe ndabere. Dịka, a pip bụ 1 / 100th nke 1%; ma ọ bụ ebe ntụpọ anọ. Ihe kachasị dị na iwu a bụ azụmaahịa abụọ nwere yen yen Japan, nke na-eburu ebe ntụpọ abụọ.
Oke dị ka ịkwụ ụgwọ ala. Ọ bụ ego ole ị debere ka ị nwee ike ịzụ ahịa ma debe ọnọdụ dị n'ahịa ahụ.
Ọ bụ ezie na ọnọdụ gị na-arụ ọrụ, onye na-ere ahịa azụmaahịa ga-ele gị anya ma ọ bụrụ na ịnwe leverage na egwuregwu. Nke a bụ n'ihi na onye ahịa ahụ na-agbaziri site n'aka onye na-ere ahịa. Yabụ, ọ bụrụ na ị nwere £ 100 ma chọọ ịzụ ahịa na £ 1,000 - ntinye ego gị ga-abụ 1:10. N'aka nke ya, oke gị ga-abụ £ 100, ebe nke a bụ 10% nke nha ọnọdụ £ 1,000!
Ndụmọdụ 2: Mee Atụmatụ ma rapara na ya
Isi ihe dị mkpa iji nwee ọrụ azụmaahịa na-aga nke ọma ma baa uru bụ ịnwe atụmatụ nke gị. Atụmatụ ahia gị ga-enye usoro dị mma iji duzie gị na ọnụego mgbanwe ego na-agbanwe agbanwe.
N'iburu nke a n'uche, otu n'ime ndụmọdụ kachasị mma maka ịzụ ahịa anyị nwere ike ịnye gị bụ iche echiche banyere ihe mgbaru ọsọ itinye ego gị ogologo oge. N'ime atụmatụ gị, ịnwere ike ịgụnye uru ị na-enweta kwa ụbọchị, njikwa ego, yana ọnụọgụ nke ụbọchị kwa ụbọchị ịchọrọ itinye na nyocha na azụmaahịa.
N'oge ụfọdụ n'oge azụmahịa, ọ dị mkpa ka atụmatụ mpụga. Nke a bụ isi ihe ị mechiri ọnọdụ ahụ wee si otu a - ị ga - enweta uru ma ọ bụ mfu. N'ikwu nke a, ọ dị oke mkpa na ị nwere ebumnuche uru n'uche tupu ị nye iwu.
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị were na ị na-ere GBP / USD. Chere na ọnụ ahịa nke ụzọ ahụ ga-ebili, yabụ na ị debere usoro ịzụta. Mana, tupu ịmalite, ị na-etinye usoro ị ga-enweta-uru. Nke a ruru 1% nke nha ọnọdụ. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ebumnuche uru gị bụ 1%, yana mgbe uru a kpatara, a ga-emechi ọnọdụ gị na akpaghị aka.
N'ikpeazụ, ịzụ ahịa na ebumnuche uru na-eme ka ọ dị mfe ịchọpụta ma ahia ọ bara uru ma ọ bụ na ọ bụghị uru ọ bara site na inyere gị aka nyochaa nzacha ọjọọ.
Nnyocha kwa ụbọchị / Oge Nkwado
Ọ nwere ike ịbụ ezigbo echiche ịhọrọ ahịa ole na ole iji lekwasị anya na ịmalite. Ma abia na nhazi oge, odikwa nma ido onwe gi ufodu. Ozugbo ị chechara banyere oge ole ị ga-etinye aka na azụmaahịa azụmaahịa, gbalịa ịrapara na ya.
Ọ bụkwa ezigbo echiche ịrara oge ụfọdụ naanị iji nyocha na ịmụ akwụkwọ akụkọ ego na nyocha teknụzụ, ebe nke a ga - enyere gị aka ịme mkpebi azụmaahịa ziri ezi. Mkpa, mndị ahịa ọ bụla na-edetu ihe ha na-ede n’akwụkwọ. Site na ịdekọ ahịa ọrụ gị, ọ nwere ike inyere gị aka ịtụle atụmatụ ịzụ ahịa gị n'ọdịnihu.
Ndụmọdụ 3: Mgbe niile na-amalite na a ngosi na Akaụntụ
Enwere ike ịgbaghara gị n'ihi na ị na-eche na akaụntụ ngosi ngosi maka maka azụmaahịa ọhụrụ. Kama nke ahụ, ha bara oke uru nye ndị ahịa ọhụụ na ndị ahịa nwere ahụmahụ. Trazụ ahịa n'ahịa nke na-atụgharị ijeri $ 5 kwa ụbọchị nwere ike ịbụ atụmanya na-akụda mmụọ. Yabụ, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịnwe omume na-agba ọsọ na akaụntụ ngosi nke gosipụtara ezigbo ọnọdụ ahịa ahịa.
Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmụ ụdọ site na mbido, ma ọ bụ na ịchọrọ ịme ụfọdụ usoro ọhụụ azụmaahịa ọhụụ gị - ịmepe akaụntụ ngosi bụ mkpebi amamihe dị na onye ahịa ọ bụla.
Site na akaụntụ ngosi ngosi, ị ga-enwe ike ịnweta ihe ngosi nka na ụzụ na ozi ngagharị ọnụahịa - dịka ị ga-eme na ụwa n'ezie. Ihe dị iche bụ na ị gaghị eji ezigbo ego. Kama nke ahụ, a ga-enye gị ego ole 'demo' iji zụọ ahịa. Ga-ahụ nhọrọ nhọrọ akaụntụ ngosi na ọtụtụ nyiwe azụmaahịa, ọ ga-ewe naanị nkeji iji debanye aha.
Ndụmọdụ 4: Nka na ụzụ na isi Research
Nkà na ụzụ na nke bụ isi na-emegide onwe ha, mana ha abụọ nwere elele ha ma a bịa n'ịchọpụta na ịkọ atụmatụ ọnụahịa Forex.
Dị ka ndị dị otú a, nke a bụ otu n'ime ihe dị mkpa Forex trading Atụmatụ maka ị nna. Iji nyere aka kpochapụ alụlụụ, n'okpuru ebe a, ị ga-ahụ nkọwa dị mkpirikpi banyere ụzọ nyocha abụọ ahụ.
Nnyocha nyocha bụ isi na-amụ banyere ọnọdụ akụ na ụba. Emere nke a site na inyocha ihe ọ bụla nwere ike inwe mmetụta na ego ego - dịka ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị ụwa, akụ na ụba (enweghị ọrụ wdg), ma ọ bụ nsogbu ahụike ụwa dịka COVID-19.
N'ikpeazụ, nnyefe na ọchịchọ na-ekpebi ego nke ego, yabụ ọ bụ ihe ezi uche dị na ịmụ ihe ọ bụla nwere ike imetụta ahụike nke akụnụba. N’aka ozo, oburu na onodu aku na uba ya na-adighi nma, ego ya di iche nwere ike ida.
Enwere akụkụ dị iche iche dị iche iche ị nwere ike iji nyere aka na nyocha dị mkpa, dị ka:
Nkọwa si IMF
Kalenda akụ na ụba
Usoro 'mgbakọ na mwepụ ọgbaghara' nọ na nyocha ọfụma. Nke ahụ bụ ịsị, ihe na-abịarute ga-agbadata, yabụ usoro na-adịkarị ịmeghachi onwe ha n'oge oge. Site n'iji ngwa nyocha, ihe omuma, teknụzụ ọnụahịa na nyocha nyocha teknụzụ - akụkọ ihe mere eme price edinam nwere ike inyere gị aka ikpebi ihe nwere ike ime n’ọdịnihu.
Nyocha teknụzụ na-eji oke akụkọ ihe mere eme na data ọnụahịa a na-atụ anya ịchọta usoro, ọ bụ n'ihi ahịa na azụmaahịa azụmaahịa na usoro (nke na-agbaso usoro). Ofdị nyocha a anaghị atụ uru bara uru ọ bụla. Kama nke ahụ, ọtụtụ ndị ahịa kwenyere na usoro ọnụahịa ga-emeghachi onwe ha ma emechaa, yabụ, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịmụ akụkọ ihe mere eme nke ọnụahịa Forex. mmegharị.
Itinye ozi a bu ezigbo mbido ma amata mgbe ị ga - esi abanye ahia ma puta. Dịka onye na-azụ ahịa azụmaahịa, ị nwere ike ịhụ ma ịzụrụ / ire ọmụrụ nwa na-adalata ma ọ bụ na ịrị elu, yana ịmatakwu ihe ndị otu ahịa nwere ike ime na-esote.
Nke a bụ isi usoro atọ nke teknụzụ nyocha ị nwere ike ịmụ:
Ihe na-eme ka candlestick
N’okpuru ebe anyị edepụtara ụfọdụ ngwa ọrụ eserese a na - ejikarị:
COT data na nchịkọta ọnọdụ
Mmekọrịta ngwá ọrụ
Ngosipụta nkà na ụzụ
Ọ bụrụ n’ịchọrọ, ịnwere ike ikpokọta ngwa ọrụ aka gị ọnụ. N'ezie, ozi ndị a nwere ike ime ka ị bụrụ onye ahịa ka mma. Okwesiri ighota na uzo obula nke ahia ahia gha adi iche, ma obughi ha nile g havenwe otu ngwaọrụ. Yabụ, mee nyocha na mbụ wee hụ ihe ga-adabara gị n'ụdị ịzụ ahịa gị.
Ndụmọdụ 5: Mara oke ego gị
Ọ dị ezigbo mkpa ịmara mgbe ịkwụsị mgbe ọ bịara n'ịzụ ahịa. N’ụzọ dị oke mkpa, ikwe ka mmetụta mmetụta uche dị ka anyaukwu na-akawanye gị nwere ike ịbụ ọdachi.
Mara oke gị dị oke mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịbụ onye ahịa na-aga nke ọma, yabụ na anyị nwere ndụmọdụ ndụmọdụ azụmaahịa edepụtara n'okpuru ebe a ga - enyere gị aka iduzi gị.
Kwụsị ma belata iwu
Nnukwu ego nwere ike inye ndị nwere nnukwu uru ego, mana enwere ike ị nwere ike ịnwe nnukwu mbibi. Abụọ n'ime isi iwu ndị ahịa na-etinyekarị na ya bụ 'kwụsị' yana 'ịgba' iwu, n'ihi na nke a na-enyere ha aka ijikwa ọnọdụ ha n'ahịa ka mma.
Usoro iwu ga-enyere gị aka ịtọ min ma ọ bụ oke ego ịzụta ma ọ bụ ree na. N'aka nke ọzọ, usoro ịkwụsị ga-enye gị ohere ịtọ ọnụahịa ịchọrọ ịzụrụ ma ọ bụ ire na ya, nke pụtara na ị gaghị agafe ọnụahịa ahụ. Ọ bụrụ na ị bụ ọorụ na a obere ọnọdụ ị ga-eme ka a price ịgba n'okpuru ọnụahịa ahịa ugbu a dị ka ebumnuche mbụ. Iji jikwaa ya, ịnwere ike ịtọ usoro nkwụsị karịa ọnụahịa ugbu a.
Ọ bụrụ na ị bụ ọorụ na a ogologo ọnọdụ ị ga-eme ka a price ịgba n'elu ọnụahịa ahịa ugbu a ka i wee nwee ike irite uru na ya. Ga-ahụzi usoro nkwụsị n'okpuru ọnụahịa dị ugbu a ka ị nwee ike ịnwale ma kpuchie ọnwụ ahụ n'ọnọdụ gị.
Kwụsị ma kwụsị iwu bụ ụzọ dị mma maka gị dịka onye ahịa iji nwee ike ị nweta uru ma belata oke oke, yana ihe niile na-akpaghị aka ozugbo ọnọdụ ahụ dị ndụ. Iwu ndị a na-agbanwe agbanwe, yabụ ị nwere ike ịgbanwe ha n'oge ọ bụla - dịka ọnọdụ ahịa ọ bụla dị ugbu a.
Ebumnuche kachasị nke nkwụsị nkwụsị bụ iwepụ mkpa ọ dị gị ka ịhazie ma tinye aka ka ahịa na-aga, nke pụtara na ị nwere ike ịgba mbọ hụ na ị gafere ahịa ahụ na uru. Ndị ahịa na-achọ ịsị 'belata ọnwụ gị, ma hapụ uru gị ọsọ'. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, nke a bụ ebe usoro nkwụsị na-abịa.
Dị ka anyị kwurula, n'adịghị ka usoro nkwụsị oge niile, enwere ike idobe nkwụsị na-agagharị na ahịa na-enye gị ohere ịgbaso usoro ahịa na-enweghị ịlele ihe na-eme mgbe niile.
Nkwụsị nkwụsị ga-agbanwe nkwụsị nkwụsị na nkwụfu ego ha (ma ọ bụ ọnụahịa mbụ). Nke a pụtara na ọ bụrụ na ụzọ ego GBP / USD na-abanye na azụ ma na-aga imegide gị, ị nwere ike ichebe uru ị rụgoro site na ọnọdụ mbụ.
Ndụmọdụ 6: Mara Onwe Gị Na Forex Trading Akwụ ụgwọ
N'agbanyeghị otu esi azụ ahịa gị, ị ga-eweta mmefu ụfọdụ n'ụzọ. Offọdụ ụgwọ ị ga-enweta ga-abụ nhọrọ kpamkpam, dị ka ụgwọ ejikọtara na ọrụ nyocha nke ahaziri iche, mmeziwanye usoro iji meziwanye, na ọrụ ozi ego gbasara ego.
Otu n'ime ndụmọdụ kachasị mma maka azụmaahịa anyị nwere ike inye gị bụ iji hụ na ị ghọtara nke ọma ụgwọ, ụgwọ ma ọ bụ ụgwọ ndị ọzọ a na-apụghị izere ezere Ọnụ ego ndị a ga-adịgasị iche dabere na onye ọ bụla na-ere ahịa, yabụ na-elele ọnụego ndị a tupu ịme ya.
N'okpuru ebe anyị edepụtara ụfọdụ ụgwọ na ụgwọ ndị kachasị ọnụ ahịa ị nwere ike izute dị ka onye ahịa azụmaahịa.
A na-ebo ndị ọrụ azụmaahịa Forex ebubo mgbe ụfọdụ mgbe ị na-azụ ahịa. Ha nwere ike ịbịa n'ụdị 2; ụgwọ edozi (n'agbanyeghị agbanye ego ahia) ma ọ bụ ego metụtara ya (nke dị elu karịa, ọrụ ahụ ga-adị elu).
Ihe atụ nke a ikwu ego bụ ore ebubo gị £ 1 kwa £ 100,000 nke ọ bụla ego ụzọ ị na-ere ma ọ bụ zụta. Ọ bụrụ na i tinye nkwekọrịta ruru £ 1 nde GBP / EUR, onye na-ere ahịa ga-ewere £ 10 na ọrụ. Ọ bụrụ na ịzụta £ 10 nde, onye na-ere ahịa ga-ewe ọrụ £ 100.
Na ore ahia ebubo ego nke 1%, mgbe ahụ ọnọdụ £ 1,000 ga-efu gị £ 10. Ọnọdụ £ 2,000 ga-efu £ 20, were gabazie.
Ozi ọma ahụ bụ na ndị na-ere ahịa azụmaahịa kachasị mma na-enye gị ohere ịbanye zụta ma ree ọkwá na-enweghị akwụ ụgwọ ọrụ azụmahịa ọ bụla. Ga-ahụ nhọrọ nke ndị na-ere ahịa dị otu a ka ị ga-agbadata na ntuziaka a.
Dika anyi kpuchitere n'ihu peeji a, mgbasa a bu ego nke onye ahia ahia gi gha enyere gi aka ahia.
The ore ga-enye gị a quote nke abụọ ahịa na onye ọ bụla ego ụzọ ha nwere na-enye. Ego abụọ ahụ ga-abụ ọnụ ahịa ego (ọnụego ịzụta) yana ọnụahịa ịrịọ (ego ị ga-ere).
Ọ bụ ezie na a na-ekwukarị mgbasa ahụ na pips (dịka anyị mere na mbụ), ọ na-adị mfe mgbe ụfọdụ ịtụgharị nke a na pasent. Nke a ga - enye gị nghọta doro anya banyere ego ole ị na - akwụ, yana otu ị ga - esi nweta uru naanị iji mebie.
Dị ka akụkụ dị n'akụkụ, lekwasị anya na akụkọ ego, volatility na liquidity. Nke a bụ n'ihi na onye na-ere ahịa nwere ike ikpebi ịgbasa mgbasa ha na nkwadebe maka ọnọdụ ahịa na-agbanwe agbanwe.
Ego na-akwụ ụgwọ abalị
Wokuko ị na-ejide ọnọdụ n'ahịa, ụgwọ ọzọ ị kwesịrị ịmara bụ 'igwe na-agba abalị'.
Nke a bụ ọmụrụ nwa abalị na-etinye na ego ọ bụla ị zụrụ ma ọ bụ ree. Nke a bụ n'ihi na ụzọ dị iche iche na-akwụ ụgwọ ego, nke pụtara na ị na-agbazinye ego n'aka onye na-ere ahịa. Dị ka o kwesịrị ịdị, nke a na-adọta mmasị.
Ego ahụ dabere na ọdịiche dị n'etiti ọnụego ọmụrụ nwa abụọ (maka ego ọ bụla). Ndị a udu kpebiri site nnukwu ego oru na ọ bụghị gị ore.
Ego a na-akwụ ụgwọ n'abali na-adabere na percentages nke na-abawanye ka ejiri ya mee ihe. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ka itinyekwu ego gị n'ọrụ, ọnụọgụ ga-akwụ elu.
Ọnụ ọzọ ị ga-eburu n'uche bụ ụgwọ nri data, a na-ebo ya ebubo kwa ọnwa. Dika data na enyere gi aka inweta oge banyere ịbanye na ịpụ na ahịa ahụ, otu esi ejikwa ọnọdụ gị yana ebe ị kwesịrị ị kwụsị nkwụsị na-efu - ọ bụ ụgwọ dị oke mkpa ị nwere ike iburu.
Onye ọ bụla na-eweta ga-enwe a dị iche iche ụgwọ maka data faili ntanetịime, n'ihi ya, ọ na-agbasaghị ịdabere na ọdịdị na àgwà nke ọrụ na-enye. Anyị na-akwado ịnwale mmadụ ole na ole tupu ị tinye ego ntinye ego kwa ọnwa.
Nkwụnye ego na iwepụ ego
E nwere ụfọdụ nnukwu iche mgbe ọ na-abịa nkwụnye ego na ndọrọ ego ụgwọ. Nke a bụ n'ihi na ọ ga-emecha na-adabere na ore ahia ajụjụ, dị ka onye ọ bụla n'elu ikpo okwu ga-eme ubé dị iche iche na usoro.
Ọtụtụ ndị na-ere ahịa azụmaahịa anaghị akwụ ụgwọ ụgwọ ọ bụla ma ọlị, mana n'ezie, na-elele usoro na ọnọdụ tupu ịdebanye aha. Otu ihe ahụ bụ maka ego nkwụnye ego.
Cheta na usoro ịkwụ ụgwọ ị họọrọ nwere ike imetụta ogologo oge ọ ga-ewe maka nkwụnye ego gị iji ruo akaụntụ ahịa gị, mana ụfọdụ ụgwọ nwere ike ịdabere dabere na ndị ọzọ ma ọ bụ ụlọ akụ ị na-edebe.
Ndụmọdụ 7: Ijikwa Ahịa Ahịa Gị
Dabere na ịzụ ahịa akparamaagwa, enwere mmetụta atọ bụ isi ndị mmadụ na - enweta mgbe ịzụrụ na ire ihe - anyaukwu, egwu na olile anya.
Mgbe ị na-azụ ahịa nke ọma, ịhapụ ịchịkwa mmetụta atọ ndị a nwere ike ịdaba na mmiri ọkụ. A na-elekarị ịdọ aka ná ntị mmetụta uche dị ka isi ihe ịga nke ọma, yabụ ụzọ kachasị mma iji nweta nke a bụ site na iwu ole na ole dị mfe.
Gbalịa ịghara ịzụ ahịa n'ihi anyaukwu. A na-ewerekarị anyaukwu dị ka nke kachasị njọ nke mmetụta atọ maka onye ahịa. Nke a bụ n'ihi na ọ nwere ike iduga ndị ahịa ịme mkpebi ọkụ ọkụ mgbe ha na-achọ ite ọla edo ahụ na njedebe nke egwurugwu.
Gbalịa ịmata ihe ọ bụla na-ejighị n'aka na Forex ahịa. Dịka anyị kwuburu, ị nwere ike ime nke a site na itinye atụmatụ azụmaahịa na nyocha na nyocha dị iche iche isi nweta ozi tupu ịme mkpebi ọ bụla.
Can nwere ike ijikwa ihe ndị ị na-atụ anya site na ibelata echiche nke ị ga-enweta nnukwu uru ozugbo. Kama nke ahụ, ndidi nwere ike ịbụ isi ihe na nke a bụ ụzọ dị mma isi na-eme njikwa ihe egwu.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ izere ọnwụnwa nke ịgafe mmefu ego gị, tinye azụmaahịa gị, hapụzie ya. Ikiri ahia a mgbe nile nwere ike iduba gi na onwunwa.
Ndụmọdụ 8: Atụla ụjọ ịgbanwe usoro gị
Offọdụ n'ime ndị ahịa kachasị ahịa n'oge ahụ na-a seasonụ iyi site na ịgbanwe usoro ha site n'oge ruo n'oge ma na-enyocha atụmatụ atụmatụ ha kpamkpam. Ọ bụrụ na ị na-eji otu atụmatụ a nwa oge na-eche dị ka ị na-enweta na uru ị kwesịrị ịbụ, ọ dịghị ihe na-egbochi gị na-agbalị a dị iche iche obibia.
Site na nke ahụ, ị ​​nwere ike ịchọpụta na ọnọdụ ego gị adịghị ka ọ dị na mbụ ma chọọ ịzigharị ego na ebumnuche gị. Dị ka anyị metụrụ na mbụ, otu ụzọ dị mma isi mee nke a bụ imepe akaụntụ ngosi iwu ka ị nwee ike nwee mmetụta maka ma atụmatụ ọhụrụ ahụ ọ ga-arụ ọrụ maka gị yana otu ị si achọ ịzụ ahịa.
Ndụmọdụ 9: Ghọta otu esi edozi akaụntụ Forex Trading
Na-enweghị ezube ịkọwapụta ihe doro anya, ngalaba a nke atụmatụ 10 Forex forex kachasị mma maka onye mbido zuru oke. N'aka ozo, oburu na itinyebeghi otu ahia na ndu gi, o nwere ike i maghi otu esi etinye akaụntụ ahia!
Ozi ọma ahụ bụ na nke a akụkụ dị mfe ma kwụ ọtọ, mana anyị chịkọtara usoro dị mfe site na usoro iji mee ka ịmalite.
1kwụ na XNUMXkwụ XNUMX - Chọta a Broka
Kwesịrị ịchọta onye na-ere ahịa kwesịrị ekwesị maka ụdị azụmaahịa gị. Anyị ewepụtala ngalaba n'okpuru otu esi achọta otu na ihe ị ga-ele anya maka, ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka ọ bụla. Anyị edepụtakwara ndị na-ere ahịa Forex kachasị atụ aro nke 2021 gaa n'ihu, ọ bụrụ na ịnweghị oge iji nyochaa otu ikpo okwu n'onwe gị.
2kwụ na XNUMXkwụ XNUMX - Họrọ a Trading na Akaụntụ
Mee mkpebi banyere ụdị ụdị azụmaahịa ịchọrọ imeghe. Fọdụ ga-abụ obere ihe nwere obere ihe ndekọ ego azụmaahịa dị ntakịrị, ebe ụfọdụ bụ maka ndị ahịa nwere ahụmịhe karịa.
3kwụ na XNUMXkwụ XNUMX - Ngwa Formdị
Ugbu a ị ga-achọ mezue ụdị ngwa ahụ na weebụsaịtị onye na-ere ahịa. Ihe ọmụma achọrọ dịgasị iche, mana ọ na-agụnyekarị aha gị na adres gị, yana nkọwa kọntaktị na ụbọchị ọmụmụ gị.
Nwekwara ike ịgwa ha ntakịrị gbasara ọnọdụ ego gị dịka ego ọnwa, ọnọdụ ọrụ yana ahụmịhe azụmaahịa. Ọzọkwa, onye ọ bụla na-ere ahịa azụmaahịa ga-adịtụ iche
Kwụ na 4kwụ XNUMX - Identity
Tupu i mechaa ndebanye aha gị na Forex, ị ga-achọ igosi onye ị bụ. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị na-ere ahịa na mbụ ga-achọ ka akwụkwọ paspọtụ gị ma ọ bụ NJ mba gị nyochaa.
Fọdụ nwere ike ịchọrọ akwụkwọ nyocha ma ọ bụ leta nwere aha gị na adreesị obibi gị. Nke a na-abụkarị site na oge ụfọdụ, kwuo n'ime ọnwa isii.
5kwụ na XNUMXkwụ XNUMX - Banye
Na-eche na ị natara nkwenye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo (nke na-abụkarị ikpe ahụ); ị nwere ike iji nkọwa nbanye gị iji nweta akaụntụ azụmaahịa ọhụụ gị.
Nzọụkwụ 6: Nye Akaụntụ Gị
Ugbu a ị nwere ike itinye ego na akaụntụ azụmaahịa gị. Kwụ ụgwọ ụzọ na-awa na-abụkarị ndị mara mma ọkọlọtọ na-agụnye; kaadị debit / kaadị akwụmụgwọ, inyefe ụlọ akụ na e-wallets dị ka Neteller, Paypal na Skrill.
Ndụmọdụ 10 - oshọrọ Onye na-ere ahia na Forex
Ọ dị ezigbo mkpa ịhọrọ onye na-ere ahịa kwesịrị ekwesị maka gị, ebe nke a ga-abụ onye gị na ya na-azụ ahịa na-enyere gị aka ịnyagharịa ụzọ gị site n'ahịa azụmaahịa.
Offọdụ n'ime ihe ịkwesịrị ịtụle mgbe ị na-ahọrọ onye na-ere ahịa azụmaahịa nke na-egbo mkpa gị bụ:
Ndi ahia a na-achịkwa site na otu ikikere nke ikikere dika nke a FCA, ASIC, ma ọ bụ CySEC?
Ego ole ka ego onye na-ere ahia na-ede?
Olee otú asọmpi bụ ore na ụgwọ na inlọrụ ngalaba?
Onye na-ere ahịa na-agbasa agbasa?
Kedu usoro ịkwụ ụgwọ ka onye na-ere ahịa na-akwado?
Ndi ahia a na-egosi ihe omuma na ihe ogugu eserese?
Kedu ihe nkwụnye ego pere mpe chọrọ?
N’iburu n’uche otu o si eri oge ọ nwere ike ịhọrọ onye na-ere ahịa azụmaahịa, na ngalaba na-esote anyị na-atụle nkenke nyiwe kachasị mma nke 2021.
Ngwongwo ahia ahia kacha mma nke 2021
Oge adighi ịhọrọ onye ahia ahia gi? Ọ bụrụ otu a, n’okpuru ị ga-ahụ nhọpụta nke usoro nyiwe a na-ahazi nke na-akwụ ụgwọ asọmpi, mkpokoro ụzọ abụọ, na ahụmịhe ahịa na-enweghị ntụpọ.
eToro bu ulo oru n’eduba na newbie forex scene. Nke a bụ n'ihi na onye na-ere ahịa na-eme ka ọ dị mfe ịzụta ma ree ego na pịa bọtịnụ. Naanị ị ga-emepe akaụntụ ma tinye ego na kaadị debit / kaadị ma ọ bụ obere akpa. Mgbe nke ahụ gasị, ọ bụghị naanị na ị ga-enwe ike ịnweta ọtụtụ ụzọ isi ụzọ abụọ, mana ị nwere ike ịzụ ahịa na enweghị ụgwọ ọrụ. Enweghị onye chọrọ ibudata ngwanrọ ọ bụla, dịka ị nwere ike site na weebụsaịtị eToro. Ọ bụ FCA, CySEC, na ASIC na-achịkwa onye na-ere ahịa na ya.
AVATrade bụ onye na-ere ahịa na ntanetị nke na-enye ihe niile site na Forex, indices, commodities, na ngwaahịa CFDs. Can nwere ike ịzụ ahịa na-akwụghị ụgwọ ọrụ ọ bụla, ma gbasaa na ụzọ ego abụọ dị oke mkpa. Nwere ike ịhọrọ MT4 ma ọ bụ usoro ikpo okwu AVATrade, nke abụọ na-abịaghachi na ngwaọrụ azụmaahịa dị elu. A na-achịkwa AVATrade nke ọma, na-anabata ọtụtụ usoro ịkwụ ụgwọ, ma chọọ nkwụnye ego kachasị naanị $ 100 ..
Anyị nwere olile anya na ịchọtala akwụkwọ ndụmọdụ azụmaahịa anyị na-enyere aka inweta ezigbo nghọta gbasara otu ị ga - esi bụrụ onye ahịa na - aga nke ọma. N’ụzọ dị oke mkpa, ọ dị ezigbo mkpa ka ị nwee nghọta doro anya etu ahịa azụmaahịa si arụ ọrụ tupu ịmalite, yana ị nwere atụmatụ ogologo oge.
I kwesịkwara attentionaa ntị maka ụgwọ niile metụtara azụmaahịa Forex, dịka mgbasa, ọrụ, na ego abalị. Abia na itinye ego n’iru gi rite uru, o nwekwara ike ime ka ihe nfu gi bawanye. Nke a nwere ike ịbụ nnukwu ịla azụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị nọ na mmefu ego.
Anyị enweghị ike ikwusi ike mkpa ọ dị nyocha na nyocha dị mkpa ma a bịa n'ịzụ ahịa azụmaahịa. Enwere otutu ngwa ahia ahia dị na mkpịsị aka gị, yabụ jide n'aka na ị ga-eji nke ahụ mee ihe.
Na ihe niile, otu n'ime ndụmọdụ kachasị mma maka ịzụ ahịa na anyị nwere ike inye gị bụ ịmalite site na iji akaụntụ akaụntụ ngosi. Ka emechara, omume na-eme ka zuru okè.